Akụkọ - Sunfly nwetara aha "AAA-larịị nkwekọrịta na-erubere kredit"
Sunfly nwetara aha "AAA-larịị nkwekọrịta na-erubere kredit"
N'oge na-adịbeghị anya, Zhejiang Provincial Market Supervision and Administration Bureau mara ọkwa 2021 Zhejiang AAA-larịị "Nkwekọrịta-asọpụrụ na Ebe E Si Nweta" Enterprise.There nwere ngụkọta nke 10 ụlọ ọrụ na Yuhuan na ndepụta. Na 10 ụlọ ọrụ, nke 4 mara ọkwa maka. oge mbụ, na 6 nọgidere na-akpọsa maka oge nke afọ abụọ. N'ime oge mgbasa ozi, a na-emejuputa njikwa dị ike ma nabata nlekọta mmekọrịta mmadụ na ibe anyị.Otu Sunflynwetara aha, ka ọ bụrụ otu n'ime ụlọ ọrụ 10 a, ọ bụ ozi ọma nye anyị, daalụ maka nkwado niile sitere n'aka ndị mmekọ anyị.
AnyịOtu Sunflyna-elekwasị anya na mmepụta nke "Sunfly" brass manifold,Igwe anaghị agba nchara,usoro mmiri agwakọta,valvụ njikwa okpomọkụ,Thermostatic valvụ,Radiator valve,valvụ bọọlụ, H valvụ,kpo oku, valvụ ikuku,valvụ nchekwa, valvụ, kpo oku ngwa, zuru ezu set nke ala kpo oku akụrụngwa.
Akụkụ pụrụ iche nke akụ na ụba ahịa bụ akụ na ụba kredit dabere na nkwekọrịta."Ndị mmadụ enweghị ike iwuli elu na-enweghị ntụkwasị obi, ọ nweghịkwa ihe a ga-eme na-enweghị ntụkwasị obi."Otú ahụ ka ọ dịkwa maka ụlọ ọrụ. Ya mere, ụlọ ọrụ ọ bụla ga-eguzobe echiche nke " nkwekọrịta na-erube isi na nke kwesịrị kredit” iji nweta nkwado siri ike n'ahịa ahịa zuru ụwa ọnụ na-emeghe ma na-abawanye ụba.
AnyịOtu Sunflyemebela 22 afọ, anyị nwere ugbu a rụpụta ihe na-akpata niile onye mmekọ`s support na ahịa trust.We nwetara aha a si Zhejiang Province Market Supervision na Administration Bureau, ọ bụ oké agbamume anyị, anyị ga-eme anyị ntụkwasị obi, okwukwe na ịkwụwa aka ọtọ nye ndị enyi anyị niile, ma gbalịsie ike bụrụ ihe nlereanya n'obodo Yuhuan anyị, ọbụlagodi mpaghara Zhejiang dum.
Ime ihe n'eziokwu na-abụ iwu mbụ nye ndị ahịa na anyịOtu Sunfly, ọtụtụ ndị ahịa na-arụkọ ọrụ na anyị ihe karịrị 10 afọ, ụfọdụ even15 afọ, isi ihe mere anyị na-eme ihe n'eziokwu niile clinets, anyị na-atụkwasị ibe anyị obi. Our Chairman Mr Jiang nakwa na-agwa anyị mkpa nke intergrity ka ndị ahịa,-eme ihe niile na-atụkwasị obi ọ bụla ọzọ, mgbe ahụ ọzọ aha na nkwanye ùgwù sitere n'aka ndị ahịa ga-abịara anyị.Otu Sunflyga-aka mma.
Oge nzipu: Sep-09-2021